प्रस्तावित राजदूतहरू खतिवडा, रेग्मी र विश्वकर्माको सुनवाइ २७ गते हुने - NewsCenterNepal.com
प्रस्तावित राजदूतहरू खतिवडा, रेग्मी र विश्वकर्माको सुनवाइ २७ गते हुने
काठमाडौँ-प्रस्तावित राजदूतहरु डा. युवराज खतिवडा, लोकदर्शन रेग्मी र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्माकाे सुनवाइ २७ गते हुने भएकाे छ । प्रस्तावित तीन राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरु अनुपस्थित भएपछि उहाँहरुमाथिको सुनुवाइ कात्तिक २७ गते सरेकाे हाे ।
गत असोज १६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई अमेरिका, पूर्व मुख्यसचिव रेग्मीलाई बेलायत र डा. विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरुलाई छलफलका लागि बोलाए पनि उनीहरु उपस्थित नभएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयाे ।
यसअघि समितिले तीन राजदूतविरुद्धका उजुरीकर्तालाई कात्तिक १७ गते बस्ने समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो । उजुरीका लागि कात्तिक १ गतेसम्मको समय दिइएकोमा ४ उजुरी परेका थिए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार खतिवडाविरुद्ध ३ वटा र रेग्मीविरुद्ध एउटा उजुरी तोकिएको समयभित्र परेका थिए । अर्को एउटा उजुरी तोकिएको समयपछि मात्र आएको थियो । तर उजुरीकर्ताहरु सम्पर्कविहीन थिए ।
उजुरीकर्ता नै सम्पर्कमा नआएपछि सुनुवाइ समितिले यही कात्तिक ४ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । आज कात्तिक १७ गते समितिको बैठकमा पनि उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि २७ गतेको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरुमाथि सुनुवाइ हुने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
राजदूतहरुको नियुक्ति सरकारको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तीन देशका लागि नियुक्त राजदूतद्वारा शपथ ग्रहण